အပြေစ်ဖြေသောယဇ | Propitiation! | Real Conversion
(ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၁၁ခုမြောက်သော ဒေသနာတော်)
၂၀၁၃၊ ဧပြီလ၁၃ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ စနေနေ့ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“ထာ၀ရဘုရားသည် သူတို့နှိပ်စက်ခြင်းငှါ၊ အလိုရှိ၍နာစေတော်မူ၏။ သူသည် အပြစ်ဖြေ သောယဇ်ကို ပူဇော်ပြီးမှ” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)
ယနေ့ညဟောကြားမည့်ထာ၀ရဘုရားအကြောင်းနှင့် ပါတ်သက်ပြီး အချို့တို့က ကြိုက်နှစ်သက်ကြ မည်မဟုတ်၊ အလွတ်ပင်မုန်းတီးကြပေမည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ထာ၀ရဘုရားအကြောင်းနှင့်ပါတ် သက်၍ မှားယွင်းစွာနားလည်ကြသည်။ ထာ၀ရဘုရား အကြောင်းဟောကြားသည့်အခါတိုင်း လူသား တို့သည် ဆန့်ကျင်ဘက်တုန့်ပြန်မှုကိုသာ ပေးတတ်ကြသည့်တရားဟောဆရာတို့ပင်လျှင် ထိုသို့မှား ယွင်းကြပေသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်က လူငယ်ပေါင်းတစ်ရာခန့်ရှိသော ဧဝံဂေလိတရားဟောပွဲကြီး၌ သင်းအုပ်ဆရာ တပါးကျွန်ုပ်အားမေးခွန်းမေးဖြစ်ခဲ့သည်။ အသင်းတော်ကြီးထွားတိုးတက်ဖို့ လိုအပ်ချက်ကိုမသိဘဲ၊ အကြိမ်ကြိမ်ဟောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းတရားဟောပွဲ၌ လူငယ်သင်းအုပ်ဆရာနှစ်ပါးပါဝင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ကယ်တင်ခြင်း၊ ထာ၀ရဘုရား၏တရားစီရင်ခြင်းနှင့် အဆုံးတွင်ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းကို အထူးသဖြင့်ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ နှစ်ဆယ့်ခုနှစ်သော လူငယ်များက ကျွန်ုပ်အား ကြိုဆိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးဧဝံဂေလိတရားဟောသောပွဲကြီး၌ ကောလိပ်ကျောင်းသား ၄ပုံတစ်ပုံ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
လူငယ်သင်းအုပ်ဆရာနှစ်ပါးတို့သည် လူထုပရိတ်ကြီးတို့၏ တုန့်ပြန်ချက်တို့ကို သဘော ကျခဲ့ကြသည်။ သို့သော် တရားဟောပွဲအပြီးတွင် ၎င်းတို့နှစ်ယောက်၏မျက်နှာတွင် မကျေနှပ်ချက် များတွေ့ရပါသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်သည် ကျေးဇူးတင်စကား ဘယ်တော့မှ မရေးခဲ့ကြပါ။ ဂုဏ် ပြုချီး ကျူးစကားလည်း ဘယ်တော့မှမရေးသားခဲ့ကြပါ။ ထိုသို့အေးစက်နေသော သူတို့နှစ်ယောက် တို့၏ အပြုအမူအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ ကျွန်ုfပ်သည် အတွေးတိမ်သောသူပါ ဟူသော ထူသူနှစ်ဦးတို့၏ အတွေးကို သဘောပေါက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဘုရားသခင်အပြစ်ကို စီရင်ခြင်း အကြောင်း၊ မဟောဘဲ လူငယ်များကို ကြိုဆိုဖိတ်ကြားသော တရားကိုဟောသင့်သည်ဟု ယူဆ ကြသည်။ ယနေ့ခေတ်သင်းအုပ်ဆရာများသည် မိမိတို့၏ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုသာ ဟောကြ သည်။ “ဧဝံဂေလိတရားကိုသာ ဟောပေးကြပါ၊ ဘုရားသခင်၏မေတ္တာကို ဟောပေးကြပါ၊ လူတွေကို ချောက်ချားအောင်၊ မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင် မဟောပါနဲ့” ဟုဆိုတတ်ကြသည်။ ထိုသို့သော တရား ဟောဆရာများကိုသာ ကျွန်ုပ်တွေ့ရပါသည်။ ထိုသို့သာ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း သည် လုံလောက်မှုမရှိနိုင်၊ အမှားအယွင်းတခုဖြစ်မည်။
ဒေါက်တာ အေ.ဒဗလျှူ ကိုက ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ဘုရားသခင်ထာ၀ရဘုရားကို ကြောက်ရွှံ့ ခြင်းမရှိဘဲ၊ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို မသိနိုင်ပါ” ဟူ၍ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ (The Root of Righteousness, Christian Publications, 1955, p. 38).. “ဘုရားသခင်ထာ၀ရဘုရားကို ကြောက်ရွှံ့ ခြင်းမရှိဘဲ၊ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို မသိနိုင်ပါ” ဟူသောအဆိုသည် အလွန်ပင်မှန်ကန် ပါသည်။ ဒေါက်တာ မာတင်လွှိင်း၊ ဂျုံးကလည်း ဒေါက်တာတိုဇာ၏အဆိုကို လက်ခံယုံကြည် သူဖြစ်သည်။ အိုင်အိန့်မူရေ့ပြောကြားသည်မှာ၊ “ဒေါက်တာလွှိင်းဂျုံးက သေစေလောက်သာ အတွက် ဘုရားသခင် သည် ဒေါသအမျက်ထွက်နေပြီး ငရဲထိတိုင်စီရင်ချက်အတိုင်း ဟောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ ငရဲသည် စိတ်သက်သက် မဟုတ်ပါ” (Rev. Iain H. Murray. The Life of Martyn Lloyd-Jones, The Banner of Truth Trust, 2013, p. 317).
တဖန်ဒေါက်တာ လွှိင်ဂျုံးပြော့ကြားခဲ့သည်မှာ “ဘုရားသခင်ထာ၀ရအကြောင်းနှင့် ပါတ်သက်ပြီး မှားယွင်းသောအတွေးခေါ်မှုသည် အဆိုးဆုံးသောအပြစ်၊ ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်သသောအပြစ်ဖြစ်သည်” (ငဘငိယယ စ. ၃၁၆). ဆက်လက်၍ ဧဝံဂေလိဆရာကြီး ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ်ရိုက်စ်လည်း ဒေါက်တာတိုဇာ နှင့် ဒေါက်တာလွှိင်ဂျုးHတို့သဘောကို ထောက်ခံခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာရိုက်စ် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
သမ္မာကျမ်းစာ၏အရှင်ထာ၀ရဘုရားသည် ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်သသောဘုရားဖြစ်သည်။ ကလဲ စားချေသောဘုရား၊ ဂရုဏာတော်အရှင်ဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။ (John R. Rice, D.D., The Great and Terrible God, Sword of the Lord Publishers, 1977, p. 12).
ယနေ့ခေတ် တရားဟောဆရာတို့သည်၊ ပညတ်တရားပါသောကျေးဇူးတရား၊ နောင်တ မပါသော ယုံကြည်ခြင်း၊ အမျက်ဒေါသမပါသော ဂရုဏာတရား၊ ငရဲမပါသော ကောင်းကင် ဘုံအကြောင်းကိုသာ ဟောကြသည်။ ထိုသို့ဟောကြားခြင်းသည် သမ္မာတရားကို ပြောင်းပြန် လှန်ကြသည်သူများဖြစ်ကြသည်။ မှားယွင်းသော ကိုယ်စားပြုမှု တခုပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်း သည် ဂုဏ်အသရေမဲ့သော၊ ဘုရားသခင်၏သတင်းစကားဖြစ်စေသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်သောဘုရား၊ အပြစ်ကိုမုန်းတီးသောဘုရား၊ ကလဲစားချေသောဘုရား၊ ကြောက်ရွှံ့သင့်သောဘုရား၊ ထိုဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်၌ ကြောက်ရွှံ့တုန်လှုပ်ကြရမည် ဖြစ်သည်။ (ibid., pp. 13,14).
အာမင်! ဒေါက်တာ တိုဇာ၊ ဒေါက်တာ လွှိင်ဂျုံးတို့နှင့် ဂျွန်အာရ်ရိုက်စ်တို့၎င်းခံယူချက်အပေါ် သဘောတူကြသည်ကို လွန်ခဲ့သောနှစ်များ ကတည်းက ကျွန်ုပ်ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ "ဘုရားသခင် သည် အပြစ်ကိုမုန်းရွှံ့သောဘုရားဖြစ်သည်"။
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ဖော်ပြာထားသောထာ၀ရဘုရားကို ထိုသို့သောဘုရားဖြစ်ကြောင်း သိရှိမည်ဆိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သော ဟေရှာယ ၅၃း၁၀နှင့်ပါတ်သတ်၍ အငြင်း ပွားစရာမရှိပါ။ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် ယေရှုအားကျွန်ုပ်တို့အတွက် ထိုသို့ပြုစေခြင်းဖြစ်သည်။
“ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းငှါအလိုတော်ရှိ၍ နာစေတော်မူ၏။ သူသည်အပြစ် ဖြေသောယဇ်ကို ပူဇော်ပြီးမှ” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)။
“အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်း ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်ထင်ရှားစွာပြတော်မူပြီ” (ရောမ ၃း၂၅)။
ဒေါက်တာ ဒဗလျှူ.အေ ခရစ္စဝေလ် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “အပြစ်ဖြေစရာယဇ်ဖြစ်သော ကားတိုင်ပေါ် က ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်ထာ၀ရဘုရား၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားက တောင်းဆိုမှုဖြစ်သည်။ လူသားအားလုံးတို့၏အပြစ်ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ ဖြောင့်မတ်သောတရားစီရင်ချက်ဖြစ်သည်” (W. A. Criswell. Ph.D., The Criswell Study Bible, Thomas Nelson Publishers, 1979, p.1327; note on Romans 3;25).
“အပြစ်ဖြေရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်ထင်ရှားစွာ ပြတော်မူပြီ” (ရောမ ၃း၂၅)၊
The Reformation Study Bible ၏ကျမ်းပိုဒ်တွင် “အပြစ်သားတို့၏အပြစ်အခကို စီရင်ဖို့အလို့ငှါ ခရစ်တော်သည် ယဇ်ကောင်ပမာ ကားတိုင်ထက်ဘုရားသခင်ကို ကျေနပ်စေခဲ့သည်။ ထိုမှတဆင့် ခွင့်လွတ်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယူဆောင်လာပေးပါသည်။ ရှင်ပေါလုရည်ညွန်းပြောကြားခဲ့သည် မှာ၊ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း (ဘုရားသားတော်) သည်ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ သေစေခြင်း မဟုတ် ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် သားတော်ယေရှုအပေါ်တွင် ပုံထားခြင်းဖြစ်သည်” ( The Reformation Study.Bible, Ligonier Ministries, 2005, p. 1618, note on Romans 3:25).
“မိမိသားတော်ကို မနှမြောဘဲ၊ ငါတို့ရှိသမျှအဖို့အလိုငှါ၊ စွန့်တော်မူသောသူသည်” (ရောမ ၈း၃၂)။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွှေကျမ်းချက်၌ မိန့်တော်မူသည်ကား၊
“ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းငှါ အလိုတော်ရှိ၍ နာစေတော်မူ၏။ သူသည် အပြစ်ဖြေသောယဇ်ကို ပူဇော်ပြီးမှ” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရွှေကျမ်းချက်၌လာသည်ကား၊ ဘုရားသခင်နှင့်ခရစ်တော်၏ဝေဒနာအကြောင်းကို ရေးသားသောစာရေးဆရာဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ဝေဒနာခံလျှက်၊ အသေခံသည်တွင်၊ “ဘုရား သခင်ပြဌာန်းတော်မူသော အလိုတော်အားဖြင့်၎င်း၊ အနာဂတံသဥာဏာ်တော်အားဖြင့်၎င်း၊ အပ်နှံခြင်းခံ ရ” (တမန်တော် ၂း၂၃)။ ကြီးမြတ်၍ကြောက်မတ်ဖွယ်သော ဘုရားသခင် ထာ၀ရဘုရား၏သမ္မာကျမ်း စာတော်က ခရစ်တော်၏ဝေဒနာနှင့်သေခြင်းအကြောင်း ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ ယောဟန်၃း၁၆ တွင်၊ “ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်” ဟုလာပါသည်။ (ယောဟန် ၃း၁၆)။ ရောမ ၈း၃၂၌ ပြောကြားသည်မှာ၊ “မိမိသားတော်ရင်းကို မနှမြောဘဲ ငါတို့ရှိသမျှ အဖို့အလိုငှါ စွန့်တော်မူသောသူ” (ရောမ ၈း၃၂)။ ဘုရားသခင်ထာ၀ရဘုရား၏အပြစ်ကို မုန်းတီးပြီး အမျက်ဒေါသသည် သားတော်ယေရှုအပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရွှေကျမ်းချက်ပိုဒ်၌ လာသည်ကား၊
“ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းငှါ၊ အလိုတော်ရှိ၍၊ နာစေတော်မူ၏။ သူသည် အပြစ်ဖြေသောယဇ်ကို ပူဇော်ပြီးမှ” (၅၃း၁၀)။
ဤတွင်၊ ဟေရှာယက “အခြင်းအရာတခု၏နောက်ကွယ်” တခုဆီသို့ကျွန်ုပ်တို့အား ခေါ်ဆောင်လာ ခြင်းဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်ဘုရား၏ ပြင်းထန်သောစိတ်ထားဖြင့်သားတော်အား ကားတိုင်ထက် ယဇ် ပူဇော်အသေခံစေပြီး အပြစ်ဖြေလွတ်စေခဲ့၏။ အပြစ်သားတို့အပေါ်ကျရောက်မည့်အပြစ်ဒဏ် ယေရှု အပေါ်ကျရောက်စေခဲ့သည်။ ရွှေကျမ်းပိုဒ်၌ဖော်ပြသည်မှာ၊ (၁)ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနှိပ်စက် တော်မူသည် (၂)ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနာစေတော်မူ၏ (၃)ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့အားယဇ် ကောင်ကဲ့သို့ ပူဇော်စေတော်မူ၏။
၁။ ပထမ၊ ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနှိပ်စက်စေတော်မူ၏။
“ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနှပ်စက်စေခြင်းငှါ” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)။
“နှိပ်စက်” ဟူသော စကားလုံးသည် အမှုန့်ချေလိုက်သည်ဟု ဆိုလို၏။ “ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုအမှုန့်ချေတော်မူ၏” ဒေါက်တာ အီးဝပ်ဒ် ဂျေယန်းပြေားကြားသည်မှာ၊ “အပြစ်မဲ့သော (ခရစ်တော်) ကို ဘုရားသခင်သည် နှိပ်စက် (အမှုန့်ချေ)တော်မူ၏” ဟုဆိုလိုသည်။ ကိုယ်တော်အား သေခြင်းသို့ အပ်နှံသောသူတို့သည် အပြစ်လွတ်ခြင်းမခံရကြပါ။ သေခြင်း၊ အသက်ရှင်ခြင်းကို မထိန်းချူပ်နိုင်ကြပါ။ ဘုရားသခင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ ထိုသို့ပြုကြခြင်းဖြစ်သည်”။ (Edward J. Young. The Book of Isaiah, William B. Eerdmans Publishing Company, 1972, volume ,.pp. 353-354).
ကျွန်ုပ်ပြောကြားပြီးသကဲ့သို့၊ ရောမ ၃း၂၅၌ ခရစ်တော်နှင့်ပါတ်သက်၍ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
“အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်ထင်ရှားစွာပြတော်မူပြီ” (ရောမ ၃း၂၃)၊
“ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်” (ယောဟန် ၃း၁၆)။
အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းရှိမှသာလျှင် အပြစ်သားတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးခံစားကြရမည်ဖြစ်သည်။
“ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းငှါ (အမှုန့်ချေ)အလိုတော်ရှိ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)၊
ဘုရားသခင်ထာ၀ရဘုရားသည် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ပင် သားတော်အားနှိပ်စက်ခဲ့သည်။ အမှုန့် ချေခဲ့သည်။ ရှင်မဿဲကျမ်းတော်မြတ်၌၊ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တွင် ထာ၀ရဘုရားက “သိုးတို့ကိုငါရိုက် သတ်၍ သိုးတို့သည် ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်” (မဿဲ ၂၆း၃၁)၌ဖော်ပြထားပါသည်။ ရှင်မာကုကျမ်း၌ လည်း ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တွင် “သိုးထိန်းကို ငါရိုက်သတ်၍ သိုးတို့သည် ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်” (မာကု ၁၄း၂၇)၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ယေရှုအားရိုက်သတ်ခဲ့သည်မှာ၊ နာကျင်စေခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကြောင့် ဂေသရှေမန် အမှောင်ည၌ ထိုသို့သောဝေဒနာကို ခံစားစေခဲ့ပါသည်။ စပါဂျန်က အောက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယခုတွင်ကိုယ်တော်သည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်လက်က ခွက်ဖလားကို ခံယူလေပြီဖြစ် သည်။ ထိုနာကျင်ခြင်းသည် ဂျူးလူမျိုးတို့ထံကမဟုတ်ဘူး၊ သစ္စာဖောက်ယုဒဆီကလည်း မဟုတ်ပါ၊ အိပ်ပျော်နေကြသော တပည့်တော်တို့ထံကလည်း မဟုတ်ချေ။ မာန်နတ်ဆိုးတို့ ထံကလည်း မဟုတ်ပါ။ ထိုနာကျင်ခြင်းခွက်ဖလားသည် ခမည်းတော်ထံကလာသည်ကို ကိုယ်တော်သိတော်မူသည်။ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသော ခွက်ဖလားက နှလုံးသားကို မခံမရပ် နိုင်အောင် ဝေဒနာဖြစ်စေခဲ့၏။ ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ခြင်းထက် အတွင်းဝိညာဉ်နာကျင်ခြင်း ခံစားရသဖြင့် ကိုယ်တော်အားတွန့်ဆုတ်စေခဲ့၏။ နောက်ဆုတ်ခြင်းမရှိဘဲ နားမလည်နိုင် အောင် ကြီးမားပြင်းထန်သော၊ ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်နှင့်ပြည့်စုံသော ခွက်ဖလားအဖခမည်းတော် ထံက ကျရောက်လာခြင်းဖြစ်သည် ဟူသော မယုံနိုင်စရာသံသယများ ဖယ်ရှားရပါမည်။ “ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းငှါ အလိုတော်ရှိ၍” ထာ၀ရဘုရားက ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များအားလုံး သူ့အပေါ်ကျရောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် တခါမှအပြစ် မပြုခဲ့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့နေရာ၌ အစားအသေခံပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အတိုင်းထက် အလွန်နှိပ်စက်ခြင်း ကိုယ်တော်အပေါ် ကျရောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ လျှိူ့ဝှက်စွာသော အမျက်ဒေါသနှင့် နှိပ်စက်ခြင်း ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကိုယ်တော်ခံစားခြင်း အား လုံလောက်အောင်ရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိနိုင်ပါ။
(C.H. Spurgeon, “The Agony in Gethsemane,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1971 reprint, volume XX, pp. 592-593).
“ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းငှါအလိုတော်ရှိ၍” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)။
အပြစ်အဖိုးအခအတွက် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်၌ ခရစ်တော်အပေါ်နှိပ်စက်ခြင်း ကျရောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်က ကိုယ်တော်အပေါ် နှိပ်စက်ခြင်းကျရောက်စေခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊
“ပြင်းစွာသော ဝေဒနာကိုခံလျှက်၊ အထူးသဖြင့်ကြိုးစား၍ ဆုတောင်းတော်မူ၏။ ချွေးထွက် တော်မူသည်ကား၊ မြေပေါ်၌ကျသော သွေးစက်ခဲကဲ့သို့ဖြစ်သတည်း” (လုကာ ၂၂း၄၄)။
အဘယ်လူသား၏လက်အားဖြင့် နာကျင်စေခြင်းမဟုတ်၊ အဘယ်မည်သို့သော လူသားတို့လည်း မဖမ်းနိုင်ကြ၊ နှိပ်စက်ခြင်းကားတိုင်ပေါ်မတင်နိုင်ကြပါ။ ဘုရားသခင်ကသာလျှင်၊ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ် ၌ နှိပ်စက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ အဖခမည်းတော်မိန့်တော်မူသည်ကား၊ “သိုးထိန်းကို ငါရိုက်သတ်၍ သိုးတို့သည် ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်” (မဿဲ ၂၆း၃၁)။ ပရောဖက်ဟေရှာယအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကြို တင်ဟောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
“ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းငှါ၊ အလိုတော်ရှိ၍” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)။
(၁၈၂၅-၁၉၀၉ ခုနှစ် အာလ်ဘတ်မက်လင် သီကုံးသော “အမျက်တော်ဖလား”
ဓမ္မသီချင်း ကို “ကောင်းကင်တံခါးဖွင့်ပြီ” ဟူသော သံစဉ်ဖြင့်သီဆိုသည်)။
၂။ ဒုတိယ၊ ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနာစေတော်မူသည်။
“ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းငှါ အလိုတော်ရှိ၍ နာစေတော်မူ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)။
ထာ၀ရဘုရားသည် အလွန်ချစ်မြတ်နိုးသော သားတော်အား နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကို သေခြင်းတိုင် ကျရောက်စေခဲ့သည်။ ဒေါက်တာဂျွန်ဂီးလ်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ကိုယ်တော်အား နာကျင်စေတော်မူခြင်း၊ နှမြောခြင်းမရှိ နှိပ်စက်ခြင်းကား၊ ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲ သောလူဆိုးများနှင့် သေခြင်းငရဲမှ ပြန်လည်ကယ်လွတ်သနားတော်မူရန်ဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ် တော်၌ နာကျင်စေခြင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်ဝယ်ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း၊ ကားတိုင်ထက် သံမှိုစွဲခံ ရခြင်း၊ လူသားတို့၏အပြစ်နေရာသို့ အစားဝင်ခဲ့ခြင်း၊ ခမည်းတော်၏အမျက်ဒေါသကျ ရောက်ခြင်း၊ အဖခမည်းတော်၏ စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံရသောအခါ ငိုလျှက် ကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ ကျွန်ုပ်၏ဘုရား ဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်တော်မူသနည်း? ဟုငိုရေူအးကးခဲ့ရသည်။ ခန္ဓာကိုယ် နှိပ်စက်ခြင်း၊ နှလုံးသားအရည်ပျော်လုမတတ်ပြင်းထန်စွာ ဝေဒနာခံခဲ့ရသည်။ (John Gill, D.D. An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, vol, V, p. 315).
ယေရှုသည် မိမိအလိုဆန္ဒအရ နာကျင်စွာထိုးနှက်ခြင်း၊ ကားတိုင်ထက်ဝေဒနာကို ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား၊
“အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် ကိုယ်အလိုသို့လိုက်ခြင်းငှါ ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သည် မဟုတ်၊ ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူသော သူ၏အလိုတော်သို့ လိုက်ခြင်းငှါဆင်းသက်၏” (ယောဟန် ၆း၃၈)။
“ဘုရားသခင်ပြဌာန်းတော်မူသော အလိုတော်အားဖြင့်၎င်း၊ အနာဂတံသဥာဏ်တော်အားဖြင့် ၎င်း” (တမန် ၂း၂၃)။
“ခရစ်တော်သည် ငါ့တို့အတွက်ကြောင့် ကျိန်ခြင်းကိုခံရသူဖြစ်သည်” (ဂလာ ၃း၂၃)။
“ထိုသခင်သည် ငါတို့၏အပြစ်မက၊ လောကီသားအပေါင်းတို့၏အပြစ် ဖြေစရာအကြောင်း ဖြစ်တော်မူ၏” (၁ယော ၂း၂)။
“အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်ထင်ရှားစွာပြတော်မူပြီ” (ရောမ ၃း၂၅)
(၁၈၂၅-၁၉၀၉ ခုနှစ် အာလ်ဘတ်မက်လင် သီကုံးသော “အမျက်တော်ဖလား”)။
၃။ တတိယ၊ ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့အားယဇ်ကောင်ကဲ့သို့ ပူဇော်တော်မူ၏၊
ကျေးဇူးပြုလျှက်၊ မတ်တပ်ရပ်ပြီး အသံကျယ်လောင်စွာ “အပြစ်ဖြေသောယဇ်” ဟူသော ကျမ်းနိဂုံးပိုင်းကို ဖတ်ကြပါစို့။
“ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းငှါ အလိုတော်ရှိ၍ နာစေတော်မူ၏။ သူသည် အပြစ် ဖြေသောယဇ်ကို ပူဇော်ပြီးမှ” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)။
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီ။ သို့ရာတွင် ဟူသောအကြောင်းအစကို သတိပြုကြည့်ပါ။ ၎င်းသည် အခန်းငယ် (အီး)ကို ရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ “ပြစ်မှားခြင်းကိုမပြု၊ သူ၏နုတ်၌မုသာမရှိသော်လည်း၊ သို့ရာတွင် . . ဟူ၍ အစချီခြင်းဖြစ်သည် (ဟေရှာ ၅၃း၉-၁၀)။ ယေရှုသည် ဘယ်တော့အခါမှ အပြစ်မပြုခဲ့သော် လည်း “ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းငှါ အလိုတော်ရှိ၍ နာစေတော်၏”။ ဒေါက်တာ ကီဘလင်အနက်ပြန်ကျမ်းတွင်၊ ကျမ်းပိုဒ်၁၀၊ အစသည် ခရစ်တော်ဘုရား၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ဆက် စပ်မှုမရှိနိုင်ပေ။ ကိုယ်စားအသေခံခြင်းနှင့် ဝေဒနာခံစားခြင်းကိုသာ ရည်ညွန်းသည်။ ထာ၀ရဘုရား သည် ပြင်းထန်သောအပြစ်ပေးခြင်းထက် ကျေးဇူးပြုတတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။” (Frank E. Gaebelein, D.D., General Editor, The Expositor's Bible Commentary, Zondervan, 1986, volume 6, p. 304).
“မိမိသားတော်ကို မနှမြောဘဲ၊ ငါတို့ရှိသမျှအဖို့အလိုငှါ စွန့်တော်မူသောသူသည်” (ရောမ ၈း၃၂)။
“ငါတို့အပြစ်များကို ကိုယ်တော်တိုင်သစ်တိုင်မှာ ခံတော်မူပြီ။ ဒဏ်ချက်တော်များအား ငါတို့ သည် အနာပျောက်လျှက် ရှိကြ၏” (၁ပေ ၂း၂၄)။
“ဘုရားသခင်သည် အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကို ငါတို့အတွက်ကြောင့် အပြစ်ရှိသောသူဖြစ် စေတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် ထိုသူအားဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်သောသူ ဖြစ်မည်အကြောင်းတည်း” (၂ကော ၅း၂၁)။
(၁၈၂၅-၁၉၀၉ ခုနှစ် အာလ်ဘတ်မက်လင် သီကုံးသော “’အမျက်တော်ဖလား”)။
ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်အား၊ အပြစ်အတွက်နာကျင်စေခဲ့ပါသည်။ သင့်အပြစ်သားဘ၀သို့ ခရစ်တော်အစားဝင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သင့်အပြစ်အဖိုးအခအတွက်၊ အပြစ်ဖြေသောယဇ်ဖြစ်စေခဲ့ပြီး၊ အမျက်တော်ဖလားမှ သင့်အားရွှေးနုတ်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သခင့်ခြေလက်၌ စွဲထားသောသံမှိုဒဏ်ရာကို စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ၎င်းသည် သင့်အဖို့ကြီးသောအမှုပြုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မဖြောင့်မတ်သောသူအဖို့ ဖြောင့်မတ်သောသူသည် အသေခံပေးခဲ့ရသည်။ ထိုမှတဆင့် ဖြောင့်မတ်သောသူ ဖြစ်စေခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ စပါဂျန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
လူသားတို့၏အပြစ်သည် ထာ၀ရငရဲမီးအိုင်၌ ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်အား အပြစ်တို့နေရာ၌ အစားထိုးပြီဆိုလျှင်၊ ထာ၀ရမီးအိုင်၌ ခရစ်တော်ကိုပစ်ချရမည်မှန်သည်။ ဘုရားသခင်အထံတော်က ပြင်းထန်သောနာကျင်ခြင်းသည် မီးငရဲ၌ ခံစားရမည့်ဝေဒနာကို ခရစ်တော်သည် ထိုအချိန်၌ အကုန်အစင်၊ အတိတ်၊ ပုစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်အတွက် ကျခံမည့် ပြစ်ဒဏ်အားလုံးပေးချေခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့သည် ပြစ်ဒဏ်ကျသင့်စရာ မလိုတော့ပါ၊ ခရစ်တော် ငါတို့အဖို့ပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်က မည်သို့စီရင်ခဲ့သ နည်း? စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ အကယ်၍ဘုရားသခင်တောင်းဆိုထားသောအရာ အကုန်အစင် လုပ်ဆောင်ခြင်း မရှိသော်၊ ကျွန်ုပ်တို့လည်း အပြစ်ဒဏ်မှလွတ်မြောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ (The New Park Street Pulpit, Pilgrim Publications, 1981 reprint, volume IV, pp. 69-70).
သို့ရာတွင် ခရစ်တော်၏ကားတိုင်ပေါ်အသေခံပေးခြင်းက ငရဲမှလူသားတို့ကို မကယ်တင်နိုင်ပါ။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံသောသူသာလျှင်၊ ကယ်တင်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ အပြစ်သားတို့အဖို့ ကိုယ်တော်အသေခံခဲ့ပြီ၊ မိမိသည်အပြစ်သားဖြစ်ပြီး၊ ခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိဖို့ ခရစ်တော်ကို ရှာဖွေသောသူ သာလျှင်၊ ကယ်တင်ခြင်းရရှိခံစားမည်ဖြစ်သည်။
သင့်အပြစ်အပေါ် အမှန်သိမြင်ခြင်း၊ ယေရှုကို အမှန်လိုအပ်ခြင်းကို အမှန်သိခြင်းကသာလျှင်၊ အနာမှပျောက်ကင်းရသော အခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုသေခြင်းကို သတိရလိုက်၊ မေ့လိုက်၊ ဖြစ်ရခြင်းကား ယေရှုကားတိုင်ပေါ်ပေးဆပ်ခြင်းကို ငြင်းပယ်၍ဖြစ်သည်။
ရေရှည်စဉ်းစားပြီး၊ ကြိုးစားမှုရှိရမည်။ ရေရှည်စဉ်းစားပြီး ကြိုးစား၍ တော့ပလေဒီ၏ ဓမ္မသီချင်း ကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။ “အပြစ်ဖြေသောယဇ်” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းဖြစ်သည်။
D (၁၇၄၀-၁၇၇၈ ခုနှစ် ဩဂတ်စတန် တောပလေဒီ သီကုံးရေးသားသော
“အပြစ်ဖြေသော ယဇ်” ဓမ္မသီချင်းကို “တိုင်တော်နား” ဟူသော
အဘယ်ကြောင့် မိတ်ဆွေယခုတွင် မယုံကြည်ရသနည်း? မည်သည့်အရာက သင့်ကိုဆီးတားနေပါသ နည်း? ယေရှုကို ကိုးစားဖို့ မည်သို့သောအပြစ်က သင့်အားဖုံးကွယ်နေပါသနည်း? မည်သို့သော ဆန္ဒက သင့်အားကယ်တင်ရှင်ထံသို့ ချီးကပ်ဖို့ဆီးတားနေပါသနည်း? မည်သို့သော ကြောက်လန့် ဖွယ်ရာများက သင့်အားကယ်တင်ရှင်သခင်ထံ ချဉ်းကပ်ဖို့ တားဆီးနေပါသနည်း? သင့်အပြစ်ဒဏ်ကို ပေးဆပ်ခဲ့သောယေရှုခရစ်ထံ သင်တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ဖို့ မည်သည့်အရာက ဆီးတားနေပါသနည်း? ထိုအ တွေးများကို ဘေးဖယ်ပါ။ တလောကလုံး၏အပြစ်ကို ဆောင်ယူသွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ် ကို ကိုးစားပါ။ (ယောဟန် ၁း၂၉)။ ကိုယ်တော်သည် သင့်အားစောင့်ဆိုင်းနေပါသည်။ အချိန်ကြာ ကြာမစောင့်ပါနှင့်။ ယနေ့ညပင်လျှင် ကိုးစားလိုက်ပါ။ ဆွေးထွေးခန်းမက သင့်အားကြိုလင့်နေပါ သည်။ ကိုယ်တော်ကိုရှာဖွေဖို့၊ ကိုးစားဖို့၊ ကယ်တင်ခြင်းရယူပြီး ထိုဆွေးနွေးခန်းသို့ ကြွလှမ်းကြပါ။
စာရေးသားလျှင် မည်သည့် တိုင်းပြည်က စာရေးသားသည်ကို ပြောပြရမည်၊ သို့မဟုတ်လျှင် ပြန်လည်ဖြေကြား နိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤတ ရားဒေသနာ အားဖြင့်ခွန်အားရလျှင် စာရေးသားပြီးပြောပြပါ။ သို့သော် မည်သည့်တိုင်းပြည်က ရေးသားသည်ကို အမြဲတမ်း ထည့်သွင်းရေးသားပေးပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏ အီးလ်မေး လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net (နှိပ်ပါ)၊ ဒေါက်တာ Hymers ကို မည်သည့်ဘာသာ စကားနှင့်မဆို စာရေးသားနိူင်သည်၊ သို့သော် ဖြစ်နိူင်လျှင် အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားပါ။ စာတိုက်ဖြင့် ရေးသားပေးပို့လိုလျှင် စာတိုက်သေတ္တာ အမှတ် ၁၅၃၀၈၊ လော့အိန်ဂျယ်၊ စီအေ ၉၀၀၁၅၊ ဖုန်း ဆက်လိုသောအခါ ( ၈၁၈)၃၅၂-၀၄၅၂။ တရားဒေသနာနိဂုံး သင်သည် ဒေါက်တာ Hymers ၏တရားဒေသနာကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် www.sermonsfortheworld.com ဖြင့် အပတ်တိုင်းကြည့်ရှုနိူင်သည်။ "တရားဒေသနာစာမူ"ကိုနှိပ်ပါ။ ဤတရားဒေသနာစာမူများသည် မူပိုင်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲ အသုံးပြုနိူင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဒေါက်တာ Hymers ၏ ဗွီဒီယိုတရားဟောချက် များကိုမူ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ အသုံးပြုနိူင်သည်။
- ဒေသနာတော် မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၇၄၀-၁၇၇၈ ခုနှစ် ဩဂတ်စတန် တောပလေဒီ သီကုံးရေးသားသော “အပြစ်ဖြေသောယဇ်” ဓမ္မသီချင်းကို “တိုင်တော်နား” ဟူသော ဓမ္မသံစဉ်ဖြင့် သီဆိုသည်)။
(SERMON NUMBER II ON ISAIAH 53)
“ထာ၀ရဘုရားသည် သူတို့နှိပ်စက်ခြင်းငှါ၊ အလိုရှိ၍နာစေတော်မူ၏။ သူသည် အပြစ်ဖြေ သောယဇ်ကို ပူဇော်ပြီးမှ” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)။
(လုကာ ၁၆း၂၃)၊ (ရောမ ၃း၂၅၊ ၈း၃၂)၊ (တမန်တော် ၂း၂၃)၊ (ယော ၃း၁၆)။
(ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)၊ (မဿဲ ၂း၂၃)၊ (မာကု ၁၄း၂၇)၊ (လုကာ ၂၂း၄၄)။
(ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)၊ (ယောဟန် ၆း၃၈)။
(ဟေရှာယ ၅၃း၁၀၊ ၅၃း၉-၁၀)၊ (ရောမ ၈း၃၂)၊ (၁ပေ ၂း၂၄)၊
(၂ကော ၅း၂၁)၊ (ယောဟန် ၁း၂၉)။